I-Tag: umphakathi | Martech Zone
Lazy Layisha Izinkinobho Zomphakathi ngeSocialite.js
NgoLwesine, Februwari 28, 2013 NgoMsombuluko, Februwari 1, 2016 Douglas Karr
Namuhla ngibe nosuku oluhle ngethimba lewebhu ku-Angie's List. Uhlu luka-Angie belulokhu lwakha indawo yabo yaba umtapo wolwazi omangalisayo… futhi ngaso sonke isikhathi baqhubeke nokusheshisa isiza sabo. Amakhasi abo alayisha ngejubane elingaboni. Uma ungangikholwa, vela leli khasi ku-Garage Doors. Leli khasi lifaka phakathi izithombe, ividiyo, nezinkinobho zokuxhumana nabantu ... Ukuqhathanisa isiza sabo nesami kufana nokujaha
NgeSonto, Septhemba 12, 2010 NgoMsombuluko, Septemba 13, 2010 Douglas Karr
Muva nje, bengilokhu ngenza ucwaningo oluningi kuvidiyo yamakhasimende ami. Ividiyo iba yinto enkulu kulokho oku-inthanethi; empeleni, kunethuba elihle lokuthi isiza sakho sizokweqiwa ngokuphelele ngamaphesenti amahle ezivakashi ngaphandle kokuthi unikeze ividiyo. Amafoni amasha we-smart nawo alungiselelwe ividiyo futhi ababukeli bayamemeza. I-Youtube isivele iyinjini yokusesha yesibili ngobukhulu kwi-Intanethi. Kepha amanye amapulatifomu wevidiyo anjalo